ट्रमामा छट्पटाउँदै सुकेधारा विस्फोटका सैलुनवाला : न प्रहरीले पुष्टि गर्न सक्यो, न छाड्यो ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
ट्रमामा छट्पटाउँदै सुकेधारा विस्फोटका सैलुनवाला : न प्रहरीले पुष्टि गर्न सक्यो, न छाड्यो !
प्रकाशित मिति: २६ श्रावण २०७६, आईतवार
काठमाडौं । जेठ १२ गते सुकेधारा विस्फोटमा परी घाइते भएका छोटु ठाकुर संघर्षको लामो बाटो हिँडेर सैलुन मालिक भएका थिए । यतिबेला उनीसँग आफ्नो भन्ने केही छैन । ट्रमा सेन्टरको छैटौं तलामा छटपटाएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । अस्पतालले डिस्चार्ज गरे पनि घर फर्किएका छैनन् । भन्छन्, ‘सबथोक सकियो, अब कहाँ जाऊँ ?’ट्रमा सेन्टरको छैटौं तला । अप्रेसन गरेका बिरामी अधैर्यपूर्वक घर फर्किने दिन कुरेर बसिरहेका छन् । अस्पतालको दक्षिणपट्टि भित्तामा टाँसिएको पोस्टरमा लेखिएको छ, ‘गेट वेल सुन ।’
बिस्तारै निको हुँदै गइरहेका बिरामीको अनुहारमा खुसी फक्रिन थालेको देखिन्छ । बेड नम्बर ६३० का छोटु ठाकुरको मुहारमा भने निराशाको बाक्लो बादल मडारिइरहेजस्तो देखिन्छ । स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आइसक्दा पनि उनी खुसी हुन सकिरहेका छैनन् । महोत्तरी गौशालाका ५६ वर्षीय उनलाई डाक्टरले डिस्चार्ज गरेको ५ दिन भइसक्यो तर घर फर्किएका छैनन् । फर्केर कहाँ जाने, कुनै टुंगो छैन ।
सबैजसो बेडमा सुतिरहेका बिरामीको छेउमा आफन्त वा परिवारका सदस्य झुम्मिएका छन् । उनीहरू सुस्त–सुस्त स्वरमा सुखदुःख साटिरहेका देखिन्छन् । छोटुको बेडछेउमा अनौठो शून्यता छ । उनका कुरुवा छैनन् । काठमाडौंमा बसेर ११ कक्षा पढ्दै गरेकी छोरी दिन बिराएर आउँछिन्, एकाध घण्टा कुर्छिन् र फर्किन्छिन् । महोत्तरीबाट आएका छोरा केही दिन कुरेर फर्किए । श्रीमती पनि केही दिन कुरेर घर सम्हाल्न फर्किइन् । केही दिन अघिसम्म उनको बेडछेउमा चौबिसै घण्टा केही प्रहरी घुमिरहेका हुन्थे । तिनले कुर्न छाडेको पनि एक साताभन्दा बढी भइसकेको छ ।
छोटु प्रहरीको निगरानीमा किन परे ? उनी किन दुई महिनायता अस्पतालको बेडमा पल्टिरहेका छन् ? यो कथा जान्न जेठ १२ गतेको घटनातर्फ फर्किनुपर्छ ।
उक्त दिन अपराह्न काठमाडौंका अनामनगर र सुकेधारामा झन्डै दस मिनेटको अन्तरमा विस्फोट भयो । नेत्रविक्रम चन्द समूहले १३ गते घोषणा गरेको बन्दको अघिल्लो साँझ शक्तिशाली विस्फोट भएको हो । अनामनगरस्थित लोकमञ्जरी कार्कीको घर र सुकेधारास्थित सैलुनमा भएको विस्फोटमा परी पाँच जनाको मृत्यु भयो । घाइते भएका ३ जना अहिले पनि उपचार गराइरहेका छन् । तिनैमध्येका एक हुन्, विस्फोट भएको सैलुनका मालिक छोटु । पाँच दिन आईसीयूमा उपचारपछि उनी होसमा फर्केका थिए । त्यसयता दुई महिनाभन्दा लामो समय ट्रमा सेन्टरको बेडमा पल्टिरहेका छन् ।
सुकेधारा विस्फोटमा दुई जनाको घटनास्थलमै र दुई जनाको ओम अस्पतालमा उपचारक्रममा मृत्यु भएको थियो । मृतकहरू दिपिन विक, गोकुल रानामगर, निरन्तर मल्ल र रामकुमार श्रेष्ठ तथा घाइतेहरू हरि खडका र सुरेन्द्र महर्जन चन्द समूहका नेता–कार्यकर्ता भएको प्रहरीले पुष्टि गरिसकेको छ । घटनालगत्तै प्रहरीले छोटु पनि चन्द समूहमा आबद्ध रहेको हुन सक्ने आशंकमा निरन्तर निगरानीमा राखेको थियो ।
दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीले उनको संलग्नता पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
क्याट्रिनालाई “रिप्लेस” गर्दै ज्याकलिन
एजेन्सी, क्याट्रिना कैफले अचेल फिल्ममा कम, ब्वायफ्रेन्ड रणवीर कपुरमा बढी ध्यान दिने गरेकी छिन् । त्यसकारण, […]
हिमालयन ट्रेकिङ ग्यास स्टोरमा आगलागी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका २७ ज्याथामा रहेको हिमालयन ट्रेकिङग्यास स्टोरमा आगलागी भएको छ । मंगलबार […]
राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रसहित दुई राप्रपाबीच एकता प्रक्रिया शुरु
काठमाडौं । कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र पशुपतिशम्शेर जबरा नेतृत्वको राष्ट्रिय […]
चितवनको सेतीदेवी सामुदायिक वनमा मृत्यु भएको पोथी गैंडा । उक्त गैंडा गत बिहीबार भालेको आक्रमणमा परी घाईते […]
हिरोसिमा आक्रमणको सत्तरी वर्ष पूरा
एजेन्सी, जापानको हिरोसिमा सहरमा आजभन्दा सत्तरी वर्ष पहिला भएको बम हमलाको स्मरण गरिएको छ । सन् १९४५ को […]
काठमाडौं । कतारमा जारी एएफसी यू–२३ च्याम्पियनसिप छनोटमा नेपालले लगातार दोस्रो हार व्यहोरेको छ । आइतबार भएको […]
६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै तेस्रो अन्तरराष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन सम्पन्न, एक महिला बोर्ड अफ ट्रस्टीमा अनुबन्धित
पश्चिमी वायुकाे प्रभाव : अर्को नयाँ प्रणाली नेपाल प्रवेश गर्दै,कस्तोे रहन्छ आगामी तीनदिन ?
पाष्टरको हर्कत : रोग निको पार्ने बहनामा धर्म परिवर्तन, उपचारको बहानामा पटक बलात्कार
मूल्य वृद्धिदर ६.५५ प्रतिशत बढ्यो
ठोकर्पा भिडन्तमा तीन गोली लागेर पनि बाँचेका अग्‍नि सापकोटा अब सभामुख